ဒုက္ခသည်များသည်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်းစာသင်ခန်း
လူ့အခွင့်အရေး & ဥပဒေများ
ကိုသွားပါ RCO နေအိမ်
Refugee Center OnlineRCO စာသင်ခန်း
မြန်မာစာSelect your languageWe manually translate much of the site into these languagesEspañolEnglishالعربيةFrançaisAutomatically translatedAf-SoomaaliAfrikaansAsụsụ IgboBahasa IndonesiaBahasa MelayuBasa SundaCatalàChinyanjaCрпски језикDeutschEspañolEuskaraFrançaisHarshen HausaHrvatskiItalianoKiswahiliKreyòl ayisyenLietuvių kalbaMagyarMalagasy fitenyMaltiNederlandsOʻzbek tiliPortuguêsRomânăShqipSlovenčinaTagalogTe Reo MāoriTiếng ViệtTürkçeazərbaycan dilibasa JawaisiZuluèdè YorùbáБеларускаяБългарскиМонголРусскийТоҷикӣУкраїнськаՀայերենייִדישעבריתاردوالعربيةپارسیनेपालीमराठीहिन्दी; हिंदीবাংলাਪੰਜਾਬੀગુજરાતીதமிழ்తెలుగుമലയാളംසිංහලภาษาไทยພາສາລາວမြန်မာစာភាសាខ្មែរ中文(简体)
ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ America မှာအောင်မြင်ဖို့ကိုကူညီအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်းနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပါ
သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်သို့မဟုတ်တစ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလေ့လာနိုငျ. သငျသညျနေ့တှငျသို့မဟုတ်ညဘက်သင်ယူနိုင်, သငျသညျအချိန်ရှိသည်အခါတိုင်း.
သင့်ရဲ့ GED ဖြတ်သွား / HiSet
GED အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း | HiSet နှင့် GED အဘိတ် Classes ရဲ့
အဆိုပါ GED နှင့် HiSet နှစ်ဦးစလုံးလေးဘာသာရပ်များသို့ခွဲခြားများမှာ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးသင်တန်းတွေလည်းပါဝင်သည်, အသီးအသီးဘာသာရပ်ဘို့တ. တစ်ဦးက GED သို့မဟုတ် HiSET ဒီပလိုမာသင်တစ်ဦးအမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရသူတစ်ဦးကဲ့သို့တူညီသောပညာရေးရှိသည်သောအလုပ်ရှင်များနှင့်ကောလိပ်များကိုပြသ.
class ဖျေါပွခကျြ4 ယူနစ်, 82 သင်ခန်းစာများ
class ဖျေါပွခကျြ31 သင်ခန်းစာများ
နောက်ထပ်အင်ဖို "ငါသည်ငါ့ပညာရေးပြီးစီးခြင်းနှင့်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရနိုင်အောင်ငါ GED သင်တန်းကိုယူပြီးဖြစ်၏။"	— Sabitra	ဘူတန်ကနေဒုက္ခသည်	ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်းအကြောင်း	အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း (RCO) ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအသစ်ဘဝတွေကိုတည်ဆောက်ကူညီနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်.
အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်ပါ	Facebook က တွစ်တာ info@therefugeecenter.org 1320 အရှေ့တောင် 122nd Ave, လက်ပံ, အော်ရီဂွန်, 97233
ဆိုင်းအပ်	စာသင်ခန်း © 2017